Da 'weyn ee naqshadeynta garaafka: Muxuu yahay astaantaada xirfadeed? | Abuurista khadka tooska ah
Xaqiiqdii waxaad khibrad badan u leedahay raadinta fursado iyo shaqo abuur bangiyada shaqada waxaadna xaqiiqsatay in dhammaan dalabyada aan loogu jeedin isla qaab xirfadeed. In kasta oo ay tani tahay wax ka dhaca dhammaan meelaha xirfadda leh, dhinacyada sida naqshadeynta garaafka, farqigaas ayaa aad loo xoojiyay. Waan hubaa inaad fikrad yar ka haysato macnaha astaan ​​astaan Junior, Senior ama Semi Senior. Laakiin, maxaa saameyn ah oo mid kasta oo ka mid ah astaamahani leeyahay oo midkee ayaad ku habboon tahay oo ma isu dhigaysaa inaad tahay naqshadeeye? Waa wax ay tahay inaad si cad u cadeyso si aad si hufan ugu shaandheysid shaqooyinka aad soo hesho oo aad xiisayn karto.
Waxaa jira wax aan la dafiri karin, waana ta tallaabooyinka ama darajooyinka kala duwan ee Waayeelnimo waxay la jaan qaadayaan baahidooda gaarka ah iyo waliba si uun waliba dhaqanka koox koox ama shirkad kasta. Shuruudaha lagu qeexayo mid ama mid kale ayaa si weyn u kala duwanaan kara marka laga beddelayo mid ka mid deegaanka shaqada. Qaarkood waxay ku saleysan yihiin tirada sannadaha (waqtiga) waayo-aragnimada ah ee shaqaale ka dambeeya, in kastoo kuwa kale ay diiradda saaraan nooca aqoonta farsamo ee shaqaaluhu leeyahay. In kasta oo ay u muuqato xoogaa wareer ah, waxaa jira kala soocyo gaar ah oo aan laga maarmi karin oo ku saabsan kala duwanaanshahan. Maanta waxaan ka wada hadli doonnaa halkan waxaanan isku dayi doonaa inaan maskaxda ka saarno nooc kasta oo shaki ah oo ku saabsan mowduucan.
Sidii aan ku cadeynay hordhaca, waxaa jira shuruudo kala geddisan oo qeexi kara heerka Waayeelnimada naqshadeeye qaabeysan. Waan wada arki doonnaa dhammaantood. Laga soo bilaabo waayo-aragnimada shaqada, aqoonta farsamada, aqoonta waxqabadka, isir ahaanta kormeerka, firfircoonaanta oo ah wakiil go'aamiya, tayada shaqadooda ama awooddooda hal-abuurnimo iyo hoggaamin.
1 Khibradaada shaqo
2 Aqoontaada farsamo
3 Aqoontaada shaqeysa
5 Go'aaminta tilmaamayaasha
Qodobkan ayaa lagu soo koobay waxa ku qaatay waqtiga ku qaatay horumarinta shaqooyinka qayb gaar ah. Waa muhiim inaad maskaxda ku hayso in shaqadii lagu qabtay qaab ku dhaqanka marxaladiina arday ahaan aysan macno samayn halkan. Dabcan, inta sano ee aad maal gashatay inaad ka shaqeyso waaxyo aan ahayn naqshadeynta garaafka lama tirin doono, sidaan horay u sheegnay. Tirooyinka lagu tixgelinayo shuruudahan waa kuwa soo socda:
Yar: In ka yar laba sano oo khibrad xirfadeed ah.
Semi Sare: Laga soo bilaabo 2 sano ilaa 6 sano oo khibrad ah.
Sare: In ka badan 6 sano oo khibrad shaqo ah oo ku saabsan qaabka naqshadeynta garaafka.
Markii aan ka hadlayno aqoonta farsamada, waxaan ka warramaynaa aaladaha illaa teknolojiyada iyo xitaa habab shaqo oo naqshadeeye ay tahay inuu ku dhaqmo booska uu doorto inuu ku fuliyo shaqooyinkiisa.
Yar: Si aad uga shaqeyso shaqadaada, waxaad u baahan tahay kormeer ama raacin shaqaale ama xubin ka tirsan kooxda si ay kuu caawiyaan markii loo baahdo.
Semi Sare: Si buuxda ayaad ugu shaqeyn kartaa shaqadaada, gabi ahaanba waad iskeed u madaxbanaan tahay, laakiin weli waxaad samaysaa khaladaad la saadaalin karo.
Sare: Isagu waa halbeeg gudaha kooxda shaqada ah wuxuuna caadi ahaan caawin doonaa asxaabta kale.
Waxay ku xiran tahay qalliinka iyo habka shaqada ee wareegyada ganacsiga.
Yar: Waxay u baahan tahay heer cayiman oo wehel ah.
Semi Sare: Wuxuu ogyahay qeyb weyn oo ka mid ah howlaha ganacsiga ku lug leh waana mid iskiis u madax banaan.
Sare: Waa mida fulisa habraaca iyo halbeegyada horumarinta mashaariicda.
Markaan ka hadlayno firfircoonaanta waxaan dhab ahaan qeexeynaa heerka baabba'nimada (laga bilaabo joogitaankeeda illaa maqnaanshaha guud) ee ka dhex jirta shaqaale.
Yar: Qormadan xirfadeed waxay u baahan tahay inay si joogto ah u calaamadeeyaan khadadka shaqadooda. Waxaad ubaahantahay si uun u qeex shaqada la qabanayo.
Semi Sare: Waqtigiisa ayuu ka faa’iideystaa oo markuu boos helo wuxuu weydiistaa howlo cusub.
Sare: Wuxuu keenaa fikrado cusub waana kan dhiiri galiya dhaqdhaqaaqa kooxda shaqada dhexdeeda.
Waxaa jira dhowr cabirro kuwaas oo ku dhex jira astaamahan:
Yar: Tayada shaqadoodu waa dhexdhexaad-hoose, iyo sidoo kale wax soo saarkoodu. Awooddeeda hal-abuurnimada shirkadda gudaheeda waa mid aan jirin.
Semi Sare: Tayada iyo waxsoosaarku waa celcelis. Hal-abuurkeedu waa hooseeyaa.
Sare: Labadaba tayadeeda shaqo, wax soo saar iyo awoodda hal-abuurnimo labaduba waa sarreeyaan.
Iyo profilekee u dhigantaa? Igu daa qaybta faallada!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Da 'weyn, muuqaalka naqshadeeye: Yaryar, Semi Sare iyo Sare
Waan jeclahay qeexitaanka semi-sare, inkasta oo aanan arkin kala soocida ficil ahaan: tixgelinta aan inta badan ku arko dalabyada waa Junior (Ma garanayo waana inuu waxbadan ka barto waayeelka) ama Senior (wuu ogyahay waana kan bartaa kan yar), intaas ka sokow umma muuqdaan inay fahmayaan qodob dhexe ama si ka sii xun, waxay u haystaan ​​aqoonta farsamada inay tahay tan kaliya ee khuseysa marka la dooranayo musharaxa.
Arrimaha sida habka shaqada ayaa ah kartida qofka masuulka ah iyo firfircoonida ayaa badanaa loola dhaqmay sidii "aan loo baahnayn" maxaa yeelay ku darsiga fikradaha ayaa yareynaya wax soo saarka naqshadeeye, taas oo, ka dib, ay tahay aalad taageero. Erayada sida "kuma siin maayo inaad ka fikirto" waxaan u maleynayaa inay ahayd aafo in dhammaanteen midowga ka mid ah ay dhibaato soo gaartay mar uun.
Aynu rajeyno in shirkadaha Isbaanishka ay ku bislaan doonaan maareynta kheyraadkooda garaafka iyo kala soociddan (aad u guuleysta oo muhiim u ah maaraynta saxda ah ee kooxda), waxay ku faafin doonaan dhaqanka ganacsiga waxayna isku dhafan doonaan maareynta astaanta sida cunsur moodelladooda ganacsi ee bixiya qiimaha suuqa.
Jawaab Ismael Alviani